Voka-pifidianana, olana sosialy, grevy: miatrana manoloana ireo hetsika mety hiseho ny Emmo/Reg | NewsMada
Par Taratra sur 07/12/2019
Tazana teny Faravohitra ireo mpitandro filaminana, ahitana ny eo anivon’ny Emmo/Reg, omaly. Nitondra fanazavana manoloana izany ny tompon’andraikitra.
“Fepetra efa noraisina sy efa mahazatra sady fomba fanao ny fanetsehana mpitandro filaminana tahaka izao. Anisan’izany ny niatrehana ny fifidianana farany teo. Tsy nisy nahatsikaritra izany ny rehetra fa asa andavanandro izao”, hoy lehiben’ny CIRGN Analamanga, ny Jly Rakotondrazaka Andry, omaly. Manoloana ireo hetsika na fitakiana sosialy samihafa mety hiseho, nambarany fa malalaka amin’izany ny rehetra. Na izany aza, nametraka fepetra ny mpitandro filaminana. “Miditra an-tsehatra avy hatrany izahay raha misy ny mampiahiahy… Hitohy hatrany amin’ny fiandohan’ny taona ny hetsika fametrahana fandriampahalamena tahaka izao”, hoy ihany izy.
Anisan’ny hanamarika izao faran’ny herinandro izao ilay antso avo sy fanentanana vahoaka any anaty tambajotran-tserasera any ny amin’ny tokony hanaovan’ny isan-tokantrano fivoahana manamorona ny arabe hitondra vilany, “bidons jaunes”, ny sora-baventy hanehoana tsy fahafaliana manoloana ny sondro-bidim-piainana sy ny olana sosialy samihafa.
Seces, Tim, mpirakidraharaha…
Ankoatra izany, mbola ao anatin’ny fitokonana ny mpirakidraharaha fitsarana, mialoha izao hamoahana ny voka-pifidianana izao. Ao anatin’izany rehetra izany ny hetsika fitokonana tanterahin’ny Seces Antananarivo, tsy mbola nahitam-bahaolana.
Etsy an-daniny, mifamindran-dalana amin’izany rehetra izany koa ny hamoahan’ny Ceni voka-pifidianana, ny alatsinainy izao. Maromaro ireo tsikera na fanakianana ataon’ny mpanohitra iny fifidianana iny sy ny vokatra ary koa ny lisi-pifidianana. Manampy ireo, hifamotoana etsy Bel Air ny avy amin’ny Tim sy ireo mpomba azy hivory… Tombanana fa mety haka fanapahan-kevitra.
Araka izany, tsy mandeha ho azy na efa fahazarana fotsiny izao fepetra raisin’ny eo anivon’ny Emmo/Reg izao. Ho tonga hatraiza avokoa anefa izany rehetra izany ?